September 2013 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Security Tools ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 10:22:00 PM 0
All Free Softwares, e-Books, Tutorials and Knowledges
Logger တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ Zemana AntiLogger v1.9.3.505 ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. AntiLogger ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်စက်ထဲက Antivirus နဲ့ မတည့်မှုတွေ မဖြစ်စေပါဘူး.. Keylogger တွေအပါအဝင် Logger တွေရဲ့ ရန်က ကင်းဝေးစေဖို့ အသင့်ဆောင်ထားကြလေ့ရှိတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
Download Setup Here !
Download Keygen Here !
IT Lenovo NEWS
Lenovo စမတ်ဖုန်းများ မြို့ရှစ်မြို့တွင် အထူးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးမည်
Maung Pauk at 9:32:00 PM 0
Lenovo အရောင်းဆိုင်များရှိသည့် မြို့ရှစ်မြို့တွင် Lenovo စမတ်ဖုန်းများကို တစ်ပြိုင်နက် အထူးနှုန်းများဖြင့်
ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်သည်ဟု Lenovo စမတ်ဖုန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ် ရရှိထားသည့် KMD Group ၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်ကပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
ယင်းအစီအစဉ်ကို အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ လားရှိုး၊ မိတ်္ထီလာ၊ မြင်းခြံ၊ ပြည်နှင့် မော်လမြိုင်မြို့များတွင် နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိ အဆိုပါ ပရိုမိုရှင်းကို ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များနှင့်အတူကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအစီအစဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြည်လမ်းရှိ တော်ဝင်စင်တာတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ KMD Group မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်သင်းသင်းစိုးက “လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကတည်းက Lenovo ကွန်ပျူတာတွေကို ရောင်းချခဲ့တဲ့ အနေအထားကနေ ခေတ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲလာတဲ့အနေအထားတွေအရ စမတ်ဖုန်းတွေကိုပါ မြန်မာဈေးကွက်ကို တင်သွင်းရောင်းချရတာပါ”ဟု ပြောသည်။
အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးမည့် Lenovo စမတ်ဖုန်းများမှာ S920, K900, S820,A390 တို့ဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်း
ပြုလုပ်မည့်နေ့တွင် K900 ၀ယ်ယူသူအား မိနစ် ၆၀၀ ဖုန်းအလကားပြောခွင့်နှင့် အခြားလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ၊S820 ၀ယ်ယူသူအား ဖုန်းရောင်းဈေး၏ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ လျှော့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး A390 ၀ယ်ယူသူအား မိနစ် ၁၀၀ ဖုန်း အလကားပြောခွင့်နှင့် အခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအား ခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း Lenovo မှ သိရသည်။
ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်ရတယ်လီနောက ဖုန်းခေါ်ဆိုခကို ကနဦးတွင် Prepaid စနစ် သုံးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် ဘီလ်ပေးချေနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မည်
Maung Pauk at 8:40:00 PM 0
ပြည်တွင်းတွင် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော နော်ဝေနိုင်ငံအခြေစိုက် တယ်လီနောကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းကတ်များ စတင်ရောင်းချရာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခများအတွက် ကြိုတင်
ငွေဖြည့်စနစ် Prepaid ကတ်စနစ်ဖြင့် အသုံးပြုသွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဘဏ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုသွားမည်
ဖြစ်သည်ဟု တယ်လီနော၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr.Jon Fredrik Baksaas က စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်က ပြောသည်။
၎င်းအနေဖြင့် ယင်းသို့ပြောကြားခြင်းမှာ ပြည်တွင်းသို့ရောက်ရှိစဉ်က စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် မီဒီယာ အချို့နှင့် ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၌ သီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ်ကဖြစ်သည်။
တယ်လီနောအနေဖြင့် မိုဘိုင်းအော်ပရေတာလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် တရားဝင်စတင်ချထားပေးသည့်အချိန်မှ ရှစ်လ အတွင်း မိုဘိုင်းဆင်းကတ်များ စတင်ရောင်းချပေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်သွားမည်ဟုလည်း ၎င်းကထပ်လောင်း
Mr.Jon Fredrik Baksaas က “လက်ရှိမှာတော့ Station တွေကို ဘယ်မှာထားမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကို လိုက်ကြည့်
နေတယ်။ လိုင်စင်စရတာနဲ့ Roll Out စလုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်နေတာပါ”ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် တယ်လီနော အနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော မိုဘိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခကို တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ် သတ်မှတ်ချက်မှာ ပဏာမ သတ်မှတ်ချက် သာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လူတိုင်းခေါ်ဆိုနိုင်မည့် သက်သာသည့် ဈေး နှုန်းဖြစ်စေရမည်ဟု Mr.Jon Fredrik Baksaas က ကတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက “ဖုန်းခေါ်ဆိုက တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်က ယာယီသတ်မှတ်ချက်ပါ။ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ လိုင်စင်သဘော တူညီချက်ရရှိပြီးတာနဲ့ အကုန်လုံးကိုတွက်ချက်ပြီး သတ်မှတ်ပေးပါမယ်။ လူတိုင်းအသုံး ပြုနိုင်မယ့် သက်သာမယ့်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အော်ပရေတာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်း Huawei နှင့် Ericsson ကုမ္ပဏီတို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Huawei ၏ နည်းပညာနှင့်သတင်း အချက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များကို ယုံကြည်သည်ဟု လည်း တယ်လီနောဥက္ကဋ္ဌက ဆိုသည်။
တယ်လီနောဥက္ကဋ္ဌ Mr.Jon Fredrik Baksaas က “Huawei က အမေရိကန်မှာ လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ နုတ်ထွက် သွားတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးနဲ့ တခြားအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တယ်လီနောအနေနဲ့ ကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအချက်မှ မပါဝင်ဘူး။ နော်ဝေမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ တယ်လီနောလုပ်ငန်းတွေ မှာလည်း Huawei နဲ့ တွဲလုပ်ထားတာပဲ။ နောက်ကမ္ဘာမှာ Huawei နဲ့ Ericsson က ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတွေပါ”ဟု အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုတွင် မဇ္ဈိမ၏မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
၎င်းတို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်အခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်အပေါ် စိုးရိမ်စိတ် မရှိ
ကြောင်းနှင့် လတ်တလောတွင် ပြည်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်စွမ်းအင်နှင့် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များကို အသုံးပြုသွားမည်
ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းအစိုးရက လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရလာသည့်အခါ အဆင်ပြေသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
ပြည်တွင်းတွင် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် တယ်လီနောကုမ္ပဏီ နှင့် ကာတာနိုင်ငံ အခြေစိုက် Ooredoo ကုမ္ပဏီတို့ကို ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Maung Pauk at 8:29:00 PM 0
အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားတာက ရောဂါ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆီးအိတ်ပြည့်တဲ့ အခါ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဆီကို အိပ်ရာကထဖို့ နှိုးဆော်တဲ့ သင်္ကေတ မရောက်ရှိလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ ဒါက ကလေးရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ။ လေ့လာမှုတွေအရ ကလေးတွေကို ဆူပှုကြိမ်မောင်းတာ၊ ဝမ်းနည်းအောင် အော်ဟစ်ရိုက်နှက်တာ စတဲ့ အပြုအမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါ ညဘက်မှာ အိပ်ရာထ ဆီး သွားတာမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေ အိပ်ရာထဲ ဆီးမသွားအောင် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ကလေးက အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားတဲ့ အခါ ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာကို မလုပ်ပါနဲ့။ ကလေးကို ခြောက်သွေ့တဲ့ အဝတ်အ စား လဲပေးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေခိုင်း ပါ။
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး အရည်လျှော့သောက် ခိုင်းပါ
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ကဖင်းဓာတ် ပါတဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကိုလာ၊ ချောကလက် စတာတွေကို လုံးဝ မကျွေး ပါနဲ့။ ရေနဲ့ တခြားအရည်တွေကိုလည်း လျှော့သောက်ခိုင်းပါ။
ဆီးသွားပြီးမှ အိပ်ရာဝင်သော အလေ့အထ ထားရှိပါ
ကလေးကို အိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆီးသွားပြီးမှ အိပ်ရာဝင်တဲ့ အကျင့် ကျင့် ပေးပါ။ တကယ်လို့ ဆီးမသွားဘဲ အိပ် ပျော်သွားရင် ကလေးကို နှိုးပြီး ဆီးသွား ခိုင်းပါ။
ကလေးတွေက ဝမ်းချုပ်တဲ့အခါ ဆီးမကြာခဏ သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ဝမ်းမှန်မှန် သွားတတ်တဲ့ အကျင့် ကို ကျင့်ပေးပါ။
တချို့လူကြီးမိဘတွေက ကလေး တွေ အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားတဲ့အခါ နာမည် ပြောင်တွေ ပေးပြီး လှောင်ပြောင်တတ် ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တာကြောင့် က လေးရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်ရတတ်ပါတယ်။ ကလေးက အ သက် ငါးနှစ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာ ညစဉ်လို လို အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားနေရင် ဆီးချို ရောဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာ စ တဲ့ ရောဂါဝေဒနာရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးကြည့် သင့်ပါတယ်။
အိုင်တီသားလေး at 3:56:00 PM 0
Windows အလန်းစားတွေကိုမှ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Windows SeVen Super XP 2013 တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Windows XP ကို Window7စတိုင်နဲ့ အသုံးပြုရမှာပါ။ Windows အလန်းစားတွေ ကိုမှ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက်တော့ အကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။ Window7ကိုလည်းသုံးချင်၊ Window XP ကိုလည်း မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက်တော့ ဂွတ်ရှယ်ပါပဲ ခင်ဗျာ။ ပါဝင်တဲ့ Features တွေကိုတော့ အောက်မှာကြည့် လိုက်ပါ။ လိုချင်ရင်တော့ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ။
Windows အလန်းစားတွေကို လိုချင်သေးရင်တော့ ဒီနေရာမှာ မှာယူပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တင်သမျှ ပို့စ်များအား Facebook ပေါ်ကနေဖတ်ချင်လျှင်
ဒေါင်းလုပ်=>>> လင့် ၁ , လင့် ၂
iOS7မှာ ကိုယ်လက်မခံချင်တဲ့ phone call နဲ့ massage တွေကို Block ကြမယ်
Aung Ko Htet at 2:53:00 PM 0
iPhone ရဲ့ နောက်ဆုံး iOS version ဖြစ်တဲ့ iOS7မှာ ကိုယ်လက်မခံချင်တဲ့ phone call နဲ့ massage တွေကို
ဘာ application မှမသုံးပဲ system မှာပါလာတဲ့ function လေးအသုံးပြုပြီးblock လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ သိပြီးသားမိတ်ဆွေအတွက် မရည်ရွယ်ပေမဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ နည်းလမ်းလေးသိသွားအောင် လို့ပါ။ ရေးသာရေးရပါတယ်။ အောင်ကိုထက် မင်းဟာက ငါတို့ သိပြီးသားပဲအလကားပါလို့အပြောခံရမှာလည်း
ကြောက်တယ်ဗျ။ေိေိ :D
1 .ပထမဦးဆုံး phone call ကို block မဲ့အကြောင်းစရေးမယ်ဗျာ။ Phone ရဲ့ application ကိုဖွင့်ပြီး Call Log ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
2 .အဲ့ဒီထဲကမှ ကိုယ် block လုပ်ချင်တဲ့ phone number လေးရဲ့ညာဘက် ဘေးမှာ i ဆိုတဲ့ icon လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် စာသားတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ အောက်နားလေးထိကို စွဲချပြီး block this caller ဆိုတဲ့စာသားလေးကို ရှာလိုက်ပါ။ အောက်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
3. အဲ့ဒီစာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ်လက်မခံချင်တဲ့ phone number ကို block လုပ်ချင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
4. Block လုပ်တာကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကနည်းလမ်းတွေအတိုင်းသွားပြီးတော့ Block this caller ဆိုတဲ့စာသားနေရာ Unblock this caller ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ရင် unblock လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
ဒါဆိုရင်တော့ iOS7မှာ ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ phone number နဲ့ messages တွေကို block လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Phone Application Root Tools ဆော့ဖ်ဝဲများ
P6 နဲ့ Nexus တွေကိုပါ Root နိုင်တဲ့ RootGenius or Root Wizard 1.3.0
Maung Pauk at 11:31:00 AM 0
RootGenius ဟာ မထင်မရှား. ဆိုပေမယ့် ခုနောက်ဆုံးထွက် Huawei P6 ကိုတော့ ကောင်းကောင်း Root နိုင်ပါတယ်.. Eroot နဲ့မရတဲ့ P6 ကို ဒီကောင်နဲ့ Root ပါ.. လက်တွေ့ပါ.. ပြီးတော့ Nexus တွေအပါအဝင် Model ပေါင်း 300 ကျော်ကို Error ကင်းကင်း နဲ့ Root ပေးနိုင်ပါတယ်.. Android 4.2.2 ထိ Support ပေးထားတဲ့ ဒီ Version 1.3.0 ဟာ 27.9.2013 ရက်နေ့က Update အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..
Root လုပ်နည်းက လွယ်ကူပါတယ်..
1. သက်ဆိုင်ရာ ဖုန်းအမျိုးအစားအလိုက် Driver ရှိရပါမယ်.. မရှိရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါ..
2. ဖုန်းမှာ USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကို အမှန်ခြစ်ပါ..
USB Debugging On နည်းကြည့်ရန်
3. ဖုန်းကို USB ကြိုးသုံးပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိန်ပါ..
4. RootGenius or Root Wizard 1.3.0.exe ကို Run ပါ.. Root ကိုနှိပ်ပါ.. ဒါပါပဲ..
small, but very strong --- only 2M size, and for the green version, Root capabilities favorably, now supports more than 300 modelsakey Root
simple, clear ---- link phone, click Root, step, Root so simple
you can browse ---- Root brush into third-party ROM, make your phone more personal; streamlined boot items, uninstall stubborn native application!
Lock/Unlock Security Tools ဆော့ဖ်ဝဲများ
Copy Protect v1.5.0 နဲ့ ဖိုင်တွေကို ကူးမရအောင် လုပ်ထားမယ်..
Maung Pauk at 11:00:00 AM 1
Copy Protect ဆိုကတည်းက ကိုယ့်ဖိုင်ကို Copy ကူးမရအောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ.. ဒီ Software က ထွက်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ. ဗားရှင်းသစ်တွေတော့ မတွေ့မိသေးပါဘူး.. ဘယ်လိုဖိုင်စနစ်မျိုးတွေ Protect လုပ်ထားနိုင်သလဲဆိုတော့ Video, Audio, Picture နဲ့ Document အမျိုးအစားတွေပါ.. Software Application တွေကိုတော့ Support မပေးပါဘူး.. ဒီကောင်ကို သုံးကြည့်တာနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်အောင် လွယ်ပါတယ်.. အင်း. လွယ်ပေမယ့် မလုပ်တတ်ရင် ပြဿနာ တက်တာက Full Version ဖြစ်အောင်လုပ်နည်းပါ..
နည်းနည်း ရှင်းပြပါရစေ. မသိသေးသူတွေအတွက်ပေါ့.
1. Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ.
2. ပြီးဆုံးခါနီးမှာ Lunch ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပြီး Finish ကိုနှိပ်ပါ.
3. Internet နဲ့ Antivirus ကို Disable လုပ်ပါ.. ပြီးရင် License.exe ကို Run As Administrator နဲ့ Run ပါ..The program was registered successfully ! လို့ ပေါ်လာရင် ပြီးပါပြီ..
4. ဒါဆိုရင်တော့ Copy Protect v 1.5.0 ကို Full Version နဲ့ သုံးနိုင်ပါပြီ..
Copy Protect your media files
Prevent Duplication of documents
Prevent Illegal Distribution
Remedy Copyright issues
Highly Secure Burning.
Media Files and Content Protection
Comprehensive Operating and File System Support
Download License Here !
iOS App Store မှာ $1.99 ဖြင့်ရောင်းနေတဲ့ Myanmar Music 1.0 ကို Free ရယူနိုင်ပါပြီ (Jailbreak မလို၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းကိုရွေးပြီးနားထောင်ရုံပဲ)
Pyae Phyo at 10:23:00 PM 0
Myanmar Music 1.0 iPhone software ကိုအရင်က မြန်မာဆိုဒ်တွေမှာ Review ပေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ သူတို့က Free မပေးပါဘူး။ $1.99 နဲ့ Apple Store မှာရောင်းချနေပါတယ်။ ဒီမှာကတော့ လုံးဝ Free ပေးပါတယ်။ပိုပြီးသိချင်ရင် http://adf.ly/WcZXz မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ သီချင်းအလွယ်တကူနားထောင်ဖို့ပေးထားတာပါ။ ဖုန်းက Jailbreak လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Myanmar Music Apps is music on demand on Myanmar.
The music is an art form consisting of sequences of sounds in time, esp tones of definite pitch organized melodically, harmonically, rhythmically and according to tone colour.
It is just sample click and you can listen to music what you like (music on demand).
★ Search with album, music, name, etc...
★ Auto playing the whole album
★ Check your now playing music
★ Next, previous, play, stop, resume song control button
★ Support background status
★ Support orientation
GPS and Google Maps ဆော့ဖ်ဝဲများ
Google Earth PRO 7.1.2.2019 Final Full
Maung Pauk at 5:37:00 PM 2
Myanmar IT Sky at 5:14:00 PM 0
တော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ရော နည်းပညာအနေနဲ့ရော
CPU နဲ့ Memory ဆိုတာအရေးပါတယ်ဆိုတာအားလုံး
ကွန်ပျူတာက CPU နဲ့ Memory ဟာဘယ်လောက်ထိ
အလုပ်လုပ်သေးလဲ ? ဘယ်လောက်ထိ
စွမ်းဆောင်နိုင်လဲ ? ဆိုတာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ မိမိကွန်ပျူတာက CPU နဲ့ Memory ကို
(၁) Window Tesk Manager ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ Tesk Manager ကို
ဖွင့်ဖို့အတွက် Keyboard မှ Ctrl+Alt+Del / delete ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါမှမဟုတ် Mouse ကို Window မှ teskbar ပေါ်ကို Right click နှိပ်ပြီး
ပေါ်လာတဲ့စာတမ်းတွေမှ Start Tesk Manager ကို click လိုက်ပါ။
(၂) Task Manager ပွင်လာပြီဆိုလျင် Performance Tab ကို click လိုက်ပါ။
အဲဒီ Tab ရဲ့အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ။ CPU Usage နဲ့ Memory ဆိုတဲ့နေရာကို
တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီနေရာတွေမှာ CPU နဲ့ Memory တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်နေ
တကယ်လို့ CPU ဟာသူ အလုပ်တွေအရမ်းလုပ်နေရတယ်ဆိုရင် CPU Usage
လိမ့်မယ်နော်။အဲဒီအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲဆိုတော့ မိမိ ကွန်ပျူတာဟာ
စိတ်ညစ် စရာကောင်းလောက်အောင်လေးလံနေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့
CPU ကိုUpgrade လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Memory ကိုပါ
ထပ်တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ မိမိကွန်ပျူတာက Memory ဟာ
အရင်က1Gb ဆိုရင် 2Gb သာတိုးလိုက်ပါ။ သတိထားရမှာက မိမိကွန်ပျူတာကို
ဆော့ဖ်ဝဲတွေ Install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ Version ၊ မိမိကွန်ပျူ
တာက Memory မှာဘယ်လောက်နေရာယူမလဲ စတဲ့အချက်တွေကိုသိထား
ဖို့တော့လိုပါမယ်။အဲဒီအချက်တွေကြောင့်လဲ ကွန်ပျူတာက CPU နဲ့ Memory
ကဲဒါဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာ CPU နဲ့ Memory နဲ့ပါတ်သတ်လို့အသေးစိတ်
မဟုတ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့ User တွေအတွက်တော့အကြမ်းဖျင်းလေးကိုတော့
နားလည်လောက်မှာလို့ယူဆပါတယ်နော်.. မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ Performance တွေ
MyanPay မှငွေများကို မိမိရဲ့ မြန်မာဘဏ်Account ထဲသို့လွှဲနည်း
Aung Ko Htet at 12:42:00 PM 2
မြန်မာနိုင်ငံကနေ pay pal အကောင့်တွေဖွင့်ပြီး ပိုက်ဆံကို မြန်မာငွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ထုတ်မလဲ ဆိုတာကိုမေးထားတဲ့ အစ်ကိုတွေအတွက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ Pay Pal လိုပဲ MyanPay ဆိုတဲ့ online banking ကိုအသုံးပြုပြီး ထုတ်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ Bank account ရှိထားရမှာဖြစ်ပြီး MyanPay account လည်းရှိထားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ကဲ...အခု MyanPay ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်တွင်း Online Payment System အကြောင်းပြောတော့မယ်ဗျာ...အဓိကပြောမှာကတော့ အင်တာနက်ကနေရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို
PayPal ကနေတစ်ဆင့် တကယ့်ငွေသားကိုယ့်လက်ထဲရောက်အောင် ထုတ်ဖို့အတွက် MyanPay ဆိုတာ သုံးကိုသုံးရမယ်ဗျာ..ကျနော်အခုအဓိကရေးမှာကတော့ MyanPay
ကနေ မိမိရဲ့ မြန်မာဘဏ်အကောင့်ထဲကိုငွေဘယ်လိုလွှဲမလဲဆိုတာပါဘဲ..ဒါကိုဘဲအဓိကထားရေးသွားပါ့မယ်... အရင်ဆုံး မိမိနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ဘဏ်တစ်ခုခုကနေလုပ်ထားတဲ့ ဘဏ်စာအုပ်
ရှိရပါ့မယ်..ဘဏ်စာအုပ်လုပ်တာကလဲ တစ်ထောင်လောက်ပဲကုန်ကျတာပါ.. ဘဏ်စာအုပ်ရပြီဆိုရင် ဘဏ် Account ရပါ့မယ်..အဲဒီဘဏ်အကောင့်ထဲကို ငွေလွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိုကေစမယ်..အရင်ဆုံး MyanPay Account လုပ်ဖို့အတွက် www.myanpay.com.mm ကိုသွားလိုက်ပါ..ပြီးတာနဲ့ Create MyanPay Account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
Create Personal Account ကိုရွေးပါ
ပြီးတာနဲ့ Register လုပ်ရပါ့မယ်..သူမေးထားတဲ့အတိုင်း အောက်ပါပုံကိုသေချာကြည့်ပြီးဖြည့်ပေးပါ .. ပြီးတာနဲ့ မိမိထည့်ထားတဲ့ ဖုန်း နဲ့ မိမိ Register လုပ်ထားတဲ့ Email Account ထဲသို့ Register Code ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်...အဲဒါကို ရိုက်ထည့်ပြီး Activate လုပ်ရင် MyanPay Account ( Unverified ) တစ်ခုရပါပြီ။ ပြီးတာနဲ့ Login ၀င်လိုက်ပါ
Login ၀င်လိုက်တာနဲ့ Unverified ကိုတွေ့ပါမယ်..Verified ဖြစ်ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံပါ လိပ်စာသို့ ဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားရပါ့မယ်..သို့မဟုတ် ငွေတစ်ထောင် သွင်းရပါမယ်..သို့မဟုတ် မိမိရဲ့မှတ်ပုံတင် Scan ဖတ်ထားတာကို သူတို့ရဲ့ Mail လိပ်စာဖြစ်တဲ့ support@myanpay.com.mm ကို ပို့ပေးရပါ့မယ်.. အကောင်းဆုံးကတော့
ဖုန်းအရင်ဆက်ပါ..မိမိအကောင့်ဖွင့်ထားကြောင်းပြောပါ.. verified လုပ်လိုကြောင်းပြောပြီး သူတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လုပ်လိုက်ပါ...ဒါဆိုရင် Verified ဖြစ်သွားမှာပါ..ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်မှတ်ပုံတင်ကို Scan လုပ်ပြီးပို့ပေးလိုက်တာ 24 နာရီအတွင်း Verified ဖြစ်သွားပါတယ်..ကဲ..Verified ဖြစ်ပီဆိုမှတော့သောင်းကျန်းလို့ရဘီ .. :D
ကဲ..အခုမိမိရဲ့အကောင့်က Verified ဖြစ်သွားပြီ..မိမိမှာ ဘဏ်စာအုပ်လဲရှိပြီဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ ဘဏ်စာအုပ်ထဲက Account Number ကို MyanPay ထဲထည့်မှာပါ..ဘယ်လိုထည့်မလဲ..အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ.. တစ်ခုသတိပေးချင်ပါတယ်.. ဘဏ်စာအုပ်မှာ Aung San ဆိုပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် MyanPay မှာလဲ Aung San ဆိုပြီး
လုပ်ပါ..သူတို့ဘက်က ငွေလွှဲလို့ နာမည်မတူရင် ရစ်ပါတယ်..အဲဒါကြောင့်တူတူလုပ်ပါ။ အိုကေအောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ။
Withdraw ကိုနှိပ်ပါ... Withdraw to Bank Account ကိုနှိပ်ပါ.. ပြီးတာနဲ့ Add your Bank Account Information ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံမှာဆိုရင် မိမိ ဘဏ်အကောင့် (Or) ဘဏ်စာအုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဘဏ်အမျိုးအစားကိုရွေးပါ..ကျွန်တော်ကတော့ KBZ မှာလုပ်ထားလို့ KBZ Bank လို့ဘဲရွေးလိုက်ပါတယ်..
အောက်က Bank Branch Name ကတော့ ဘဏ်ခွဲအမည်ပါ..ကျွန်တော်က နေပြည်တော် ပေါင်းလောင်းနားမှာနေတာဆိုတော့ Naypyidaw Branch (2 ) လို့ရွေးချယ်ပေး
လိုက်ပါတယ်.. အောက်က Bank Account Number မှာတော့ မိမိဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ Account Number တွေကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်... ပြီးတာနဲ့ Add New ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ..ဒါဆိုရင မိမိရဲ့ ဘဏ်အကောင့် MyanPay အတွင်းထည့်သွင်းခြင်းပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ.. ငွေထုတ်တဲ့နည်းစတင်ပါတော့မယ်... ထုံးစံအတိုင်း Withdraw >> Withdraw to Bank Account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်..
အဲဒီနေရာမှာ Select Bank Account ရဲ့ ဘေးနားက မြှားလေးကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ စောစောက မိမိထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ မိမိရဲ့ ဘဏ်အကောင့်နံပတ်က အလိုလိုကျလာပါ
လိမ့်မယ်..အဲဒီအပေါ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ..ဒါဆိုရင်အောက်က ပုံအတိုင်း Bank Information ကျလာပါလိမ့်မယ်။
ကဲ..ကျလာပြီဆိုရင် မိမိလွှဲပြောင်းလိုတဲ့ မိမိရဲ့ Account Balance ထဲမယ်ရှိတဲ့ ငွေပမာဏကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့..ပြီး၇င် Withdraw ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့။ အောက်က ပုံကို
ပုံမှာဆိုရင် ငွေကို ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ချက်ချင်းးမလွှဲသေးဘဲ Pending ( ဆိုင်းငံ့ ) နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်...ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် MyanPay ကိုဖုန်းဆက်ပြီး
ငွေလွှဲထားတဲ့အကြောင်းအပြည့်အစုံကိုပြောပြလိုက်ပါ..သူတို့ဘက်က ချက်ချင်းလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်..နောက် သုံးလေးနာရီအတွင်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ကနေ လူကြီးမင်းရှင့် လူကြီးမင်းရဲ့ အကောင့်ထဲကို ဘယ်လောက်ရောက်နေပါပြီဆိုပြီး ဖုန်းဆက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်မျာ.. :D ကဲ..ဒါကတော့ဗျာ..အင်တာနက်ပေါ်ကနေငွေရှာနေတဲ့ ကျနော်တို့ ငွေဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ထုတ်လာတယ်ဆိုတာရေးပြလိုက်တာပါဘဲ.....အားလုံးဘဲအဆင်ပြေမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
credit >>>>> MM IT Helper
iOS Software Lock/Unlock Phone Application
iPhone ကိုင်သောသူများအတွက် Application lock ပါ
Pyae Phyo at 10:27:00 AM 1
ခု iPhone ကိုင်နေတဲ့ကိုကြီးမကြီးအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Android မှာလည်း application lock ရှိသလို ခုလည်း iPhone မှာရှိပါပြီ။ (သူများကိုမကြည့်စေချင်ရင် ကြိုက်တာကို lock ပေးလိုက် ဖလန်းဖလန်းထတဲ့သူစိမ်းတွေတော့ ကြည့်ချင်တိုင်းကြည့်လို့မရတော့ဘူးလေ) ကိုယ်ဖွက်ချင်တာလည်းဖွက်လို့ရသလို ကိုယ်မကြည့်စေချင်တာလည်း Password အုပ်ထားလိုက်ပေါ့။ Apple Store မှာ Free ပေးထားပါတယ်။ ပိုသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/Wb7XY မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလို့လွယ်အောင်တမင် ရှဲလိုက်တာပါ။ တခြားဆိုဒ်မှာ ဒါမျိုးမတွေ့သေးပါဘူး။ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
+Email photos/videos to others from inside the app
So what are you waiting for , try it out now.
P.S if you are wondering what's up with the weird icon ? well we don't wanna look too obvious now , do we ?
Download => Link 1/ Link2/ Link 3
iOS အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် ပန်ချီဆွဲလေ့ကျင့်ရအောင် (for iOS)
Myanmar IT Sky at 3:39:00 AM 0
ဒီတစ်ခါ iOS ကိုင်ဆောင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ
ကိုအမျိုးကောင်းသားကိုလဲ credit ပေးပါတယ်
Ebook Ebooks Hack Tools Hacking Hacking စာအုပ်
Cookie Stealing (သူတစ်ပါး၏ Facebook ကို Password မသိဘဲ ခိုးသုံးနည်း)
Pyae Phyo at 9:03:00 PM 6
MinMinITSolutions မှာတွေ့လို့ ပြန် share လိုက်ပါတယ်။ ဟက်ကင်း(hacking) ပညာတစ်ခုပါ။ ခက်လည်းခက်သလို လွယ်လည်းလွယ်ပါတယ်။ Facebook တင်မကဘူး။ တခြား social networking ကိုလည်း ဟက်လို့ရတယ်ထင်ပါတယ်။ MHU က Hearless ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Phone Application Rooting Samsung Samsung Rooting နည်းလမ်းများ
Samsung Glaxy Ace3Galaxy Ace3GT-S7270, GT-S7272, GT-S7275 တွေကို Root နည်း
Maung Pauk at 8:06:00 PM 7
ကျွန်တော့်ဆီကို Ace3နှစ်လုံးရောက်လာတယ်ဗျာ.. Root ချင်လို့တဲ့. ဟိုတစ်ပတ်က. ဒါနဲ့ ဆရာ့ဆီကို ပြေးရတယ်.. forum xda ကိုလေ.. သူ့ဆီက ရလာတာလေးနဲ့ လုပ်လိုက်တာ ရတယ်ဗျ.. လုပ်လိုက်တဲ့ နည်းလေးနဲ့ Software လေး မျှပါမယ်.. ဒီနည်းကို MMSD မှာလည်းတွေ့တယ်ဗျ. အတူတူပါပဲ.. MMSD ကိုလည်း Credit ပေးပါတယ်.. ဒီကောင်က Galaxy Ace3GT-S7270 GT-S7272 GT-S7275 အတွက်ရတယ်လို့ သိရပြီး ကျွန်တော်ကတော့ 7270 မှာ Root ထားတာပါ..
1. ပထမဆုံး ထုံးစံအတိုင်း Computer မှာ Driver တင်ထားရပါမယ်.. မရှိရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါ.. ပြီးရင် ဖုန်းမှာထည့်တဲ့ SD Card လေးတစ်ကဒ်.အသင့်ရှိပါစေ..
2. ဖုန်းမှာ USB Debugging နဲ့ Unknown Source ကို အမှန်ခြစ်ထားရပါမယ်.. နည်းလမ်းကတော့
Setting ကိုနှိပ်ပါ.. ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားမှာ More >> ဆိုတာရှိတယ်. အဲဒါကို တစ်ချက်နှိပ်..
ပြီးရင် Developer Option ကိုတစ်ချက်နှိပ်..
USB Debugging ကို အမှန်ခြစ်လိုက်.. Warning တက်လာရင် OK ကိုနှိပ်..
Back နဲ့ပြန်ထွက်ပြီး Security ကိုတစ်ချက်နှိပ်. ပြီးရင် Unknown Source ကို အမှန်ခြစ်လိုက်.. ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လန့်စရာ စာလုံးတွေတက်လာလိမ့်မယ်.. ဖတ်မနေနဲ့ OK သာနှိပ်..
ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ ပြင်ဆင်ရမယ့် ကိစ္စ ပြီးသွားပြီ...
3. လိုအပ်တဲ့ ဖိုင် (၃) မျိုးဒေါင်းရပါမယ်.. Odin ကတော့ ရှိပြီးသားဆို မလိုဘူး..
Download Root File
4. ဒေါင်းပြီးသွားရင် Odin ကိုဖြည်ထားလိုက်ပါ. ကျန်တာကို မဖြည်နဲ့နှော်. ဒီအတိုင်းလေးပဲထားအုံး..
5. ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ.. ဖုန်းရဲ့ Volume Down (အသံတိုးတဲ့ခလုတ်) + Home ( အလယ်အောက်နားကခလုတ် ) ကိုတွဲဖိထားပြီး Power ကိုပါဖိလိုက်ပါ... Warning ! တက်လာရင် ခလုတ်အားလုံးကို လွှတ်ပြီး Volume Up (အသံချဲ့ခလုတ်) ကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. Downloading... ဆိုပြီး Download Mode ကိုရောက်ပါမယ်.. ခုမှ စပြီး ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ရမှာပါ..
6. ဒေါင်းပြီးဖြည့်ထားတဲ့ Odin ထဲက Odin.exe ကို Run လိုက်ပါ.. Odin မှာ အပေါ်နားလေးက Auto Reboot နဲ့ F.Reset Time ကို အမှန်ခြစ်ထားရဲ့လားကြည့်ပါ. မခြစ်ရသေးရင် ခြစ်လိုက်အုံး..
7. Odin ထဲက PDA ကိုနှိပ်ပါ. ပေါ်လာတဲ့အကွက်ထဲမှာ ဒေါင်းထားတဲ့ထဲက မဖြည်ဘဲထားတဲ့ MP Recovery.tar ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုရွေးပြီး Open ကိုနှိပ်ပါ..
8. Odin ထဲက Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. သူ့အလိုလို အလုပ်တွေလုပ်သွားလိမ့်မယ်.. ဖုန်းက အလိုအလျောက် Restart ကျပြီးပြန်တက်လာလိမ့်မယ်.. ( အပေါ်မှာတုန်းက Auto Reboot ကို အမှန်မခြစ်ခဲ့ရင် Reboot မကျဘူး.. ဒါဆို ဖုန်းကို ကိုယ်တိုင် Reboot လုပ်ပေးရမှာ.. ) ဒါဆိုရင် ပထမအဆင့် Recovery သွင်းခြင်း ပြီးသွားပြီ.. မ Root ရသေးဘူး..
8. Root တော့မယ်.. ဖုန်းထဲကိုထည့်မယ့် SD Card ထဲကို ဒေါင်းထားတဲ့ MP Root.zip လေးထည့်လိုက်ပါ.. ဘယ်လိုနည်းနဲ့ထည့်ထည့်ဗျာ.. SD ထဲကိုရောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်.. အဲဒီ SD ကို ဖုန်းထဲကိုထည့်ပြီး ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်..
9. ဖုန်းရဲ့ Volume up + Home + Power ကိုတွဲဖိထားလိုက်ပါ.. Logo တက်လာရင် အားလုံးကို လွှတ်လိုက်.. ဒါဆို Recovery Mode ကိုရောက်ပြီ.. ( Vol up နဲ့ Home ကိုတွဲဖိပြီးမှ Power ကို ဖိတာ ပိုသေချာတယ်.)
10. Recovery ထဲမှာ choose zip from sdcard ဆီကို Volume Up / Dwn ခလုတ်တွေသုံးပြီးရွှေ့လိုက်.. ရောက်ရင် Home ကိုတစ်ချက်နှိပ်.. အထဲမှာ ခုနက ထည့်ခဲ့တဲ့ MP Root.zip ကိုမြင်ရတယ်.. အဲဒီကိုရောက်အောင်ရွှေ့. ပြီးရင် Home ကို တစ်ချက်ထပ်နှိပ်.. ဒါဆို သူ Root နေပြီ....
11. ပြီးသွားရင်တော့ Reboot System Now ဆိုတဲ့စာပေါ်မှာ ရောက်နေတယ်ဗျ.. မရောက်ရင် ရောက်အောင်ရွှေ့ပြီး Home ကိုနှိပ်ပေးလိုက်.. ဖုန်းက Restart ကျသွားပြီး ပြန်တက်လာရင် နောက်ဆုံးပေါ် SuperSu နဲ့ Root ပေါက်ပါပြီ...
သြော်.. မြန်မာစာလား.. အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ. လုပ်နည်းပါ ရေးထားတယ်..
ကီးဘုတ်ကတော့ MyanKey Pro Beta5, Frozen Keyboard Pro 0.52,0.6.0 ကြိုက်တာထည့် အကုန်အလုပ်လုပ်တယ်..
Clash of Clans ( COC ) Update ဗားရှင်းသစ် 9.105.4
Samsung တွေ Adb Mode ကနေ FRP Lock ဖြည်နိုင်မယ့် GPTTeamFRPTool V1.0 Beta
Blog Archive May (67) April (47) March (15) February (5) January (20) December (41) November (18) October (4) September (11) August (20) July (41) June (41) May (23) April (20) March (22) February (23) January (28) December (21) November (57) October (59) September (72) August (111) July (181) June (146) May (136) April (289) March (234) February (227) January (154) December (90) November (107) October (105) September (90) August (146) July (119) June (96) May (158) April (89) March (114) February (193) January (156) December (154) November (133) October (87) September (57) August (78) July (73) June (61) May (48) April (49) March (78) February (292) January (130) December (124) November (117) October (153) September (240) August (178) July (154) June (136) May (141) April (112) March (97) February (149) January (93) December (39) November (11) October (46) September (13) August (4) May (2) April (3)